Member Directory | Martech Zone
Jui Bhatia dia mpandalina rindrambaiko ao Techimply, India. Miaraka amin'ny traikefa amin'ny sehatry ny haitao, dia nahafehy ny fahalalany momba ny (fomba) sy ny (zavatra) hatao amin'ny orinasa izy. Ary koa, izy te hizara ny fahalalany momba lohahevitra vitsivitsy mifandraika amin'ny teknolojia amin'ireo mpamaky izay afaka manampy amin'ny karazana orinasa.
Elena Teselko dia mpitantana ny atiny YouScan. Manana traikefa mihoatra ny dimy taona amin'ny marketing sy serasera izy, ao anatin'izany ny fiasana amin'ny maso ivoho fanaovana dokambarotra, orinasa IT, ary media.